eNasha.com - सीटी स्क्यानभित्र बिर्सिइएकी महिला
सीटी स्क्यानभित्र बिर्सिइएकी महिला
क्यान्सरकी एक विरामीलाई सिटी स्क्यान गरिसकेपछि उनलाई घण्टौँ त्यहीँ बिर्सिइएको एपी समाचार संस्थाले जनाएको छ । त्यहाँका प्राविधिकहरुले उनलाई बिर्सिएपछि उनी घण्टौँ थुनिनु परेको र घण्टौँ एउटा बाकसभित्र अँध्यारो ठाउँमा आफूले पाएपछि ती महिलाले निकै होहल्ला मच्चाए पनि अरुले सुन्न नसकेको समाचारमा जनाइएको छ ।
अमेरिकाको एरिजोनास्थित टुक्सोन शहरकी एल्विरा तेलेजले आफू थुनिएको चाल पाएपछि आफ्नो मोबाइलबाट ९११ मा फोन गरेर आफ्नो उद्दार आफैँले गरेकी थिइन् ।
प्रहरी अधिकारीहरुले यो थाहा पाएपछि क्यान्सरसम्बन्धी अध्ययन गर्ने उक्त कार्यालयमा ती महिलाका छोरासहित उपस्थित भएका थिए । तर त्यो अफिस पर्ूण्ा रुपमा बन्द भएको प्रहरीले पाएको थियो । प्रहरी अधिकारी तथा प्रवक्ता डन हान्केले पछि कार्यालयका प्रबन्धकलाई फोन गरेका थिए । तर कार्यालयका प्रबन्धकसमेत यो कुरामा अनजान रहेको बताइएको छ ।
एल्विरालाई त्यसलगत्तै अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ताकि उनमा अन्य किसिमको स्वास्थ्य समस्या नदेखियोस् । तर अर्को दिन विहानै अस्पतालले उनको अन्य अवस्था सन्तोषजनक रहेको भनी उनलाई घर पठाइदिएको थियो ।
गएको हप्ता घटेको यस घटनापछि आफूलाई सुत्नमा असजिलो हुने गरेको र यससम्बन्धमा उनीहरुको हेरचाह गरिरहेको क्यान्सर अस्पताल एरिजोना अन्कोलोजी एसोसिएट्सले भने यसलाई सामान्य मानिरहेको छ । उनी अस्पतालबाट घर आइसकेपछि एरिजोना अन्कोलोजी एसोसिएट्सका कर्मचारीहरुले एल्विरासँग क्षमा मागेका थिए ।
स्पेनी भाषा बोल्ने एल्विराले भनिन्- "खै के पो भन्ने - सोच्दा सोच्दा गरेँ, न तिनलाई रिसले सराप्नु न त खुशी हुनु ! ज्यादै अप्ठेरोमा पो परेँ !"
हड्डीको क्यान्सर भएको यी ६७ वर्षीया एल्विरा त्यसबेला शरीरका अन्य ठाउँमा पनि क्यान्सर र्सन थाल्यो कि भनी जँचाउन पुगेकी थिइन् । त्यतिबेलै एक जना प्राविधिकले उनलाई एउटा ठूलो बाकसजस्तो मेसिनमा साँझको ४ बजे सेप्टेम्बर १९ मा छिराएको थियो । मधुरो प्रकाशमा उनलाई आँखा चिम्म गर्न भनिएको थियो र २५ मिनेटसम्म हलचल नगर्नसमेत उनलाई भनिएको थियो ।
सुतिसुति घडी हर्ेन अप्ठेरो भएकाले उनले समयको भनी भेउ पाउन सकिनन् र रहँदाबस्दा उनी त्यहीँ निदाइछन् । केही समय झप्प न्रि्राबाट उठेपछि उनलाई निकै समय बितेको लाग्यो । तर त्यो मेसिनबाट निस्कने चान्स नै थिएन । कसोकसो मेसिनलाई यताउता ठेल्दै उनी निस्किइन् ।
मेसिनबाट बाहिर निस्केपछि उनले त्यहाँका डाक्टरलाई भेटिन् र आफ्ना छोरालाई फोन गरिन् र छोराले चाहिँ प्रहरीलाई खबर गरे । अस्पतालमा रहेका एक डाक्टर स्टभन केचलले भने- "कसैलाई टेबुलमा पर्खिरहँदा आमै निदाइछन् र कसैले पनि उनलाई घर जाऊ भनेन छन् भन्ने पो सोचिरहेको थिएँ !"